Sharadka Kubadda Koleyga - CasinoAdvisor.eu
Ma waxaad ku jirtaa NBA ama Euro-league oo ma ku waalan tahay kubbadda koleyga? Kaliya ha fariisan oo daawan marka aad ku guuleysan karto lacag adag adoo ku raaxeysanaya ciyaarta. Sharadka kubbadda koleyga ee khadka tooska ah wuxuu ku siinayaa fursad aad ku kasbato aqoontaada isboorti oo aad u noqoto guuleyste. Haddii aadan ka ogayn waxa ku saabsan, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Laga soo bilaabo xulashooyinka kala duwan ee sharadka illaa qaar ka mid ah khaladaadka khamaarka ee ugu badan ee la sameeyo, dhammaanteen waan wada daboolan nahay.
Ogaanshaha xulashooyinkaaga Sharadka
Haddii aad tahay rookie oo aadan lahayn khamaara ciyaaraha ka hor, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in sharadku aanu ahayn oo keliya saadaalinta kooxda guuleysanaysa ciyaar. Sharadka khadka tooska ah wuxuu keenaa xulashooyin badan oo sharuud badan oo xiiso leh, taas oo ka dhigaysa khibradaada khamaarka mid xiiso badan oo xiiso leh. Kahor intaadan khamaaristaada dhigin ciyaar kasta, waxaad xaqiiqdii ubaahantahay inaad fahanto xulashooyinka sharadka ee aad heli karto.
Khamaarka Lacagta: Mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna fudud ee khamaarka waxaa ka mid ah Khamaarista Lacagta. Aad bay caan ugu tahay khamaarayaasha madadaalada. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad saadaaliso guusha ciyaarta. Haddii saadaashaadu sax noqoto, abaalmarinta adigaa iska leh.
Fidinta khamaarista: Tani waa khamaaris kale oo caan ah oo ka dhex jira khamaarayaasha khadka tooska ah ka dib marka la shaandheeyo Moneyline. Waxay u noqon kartaa wax yar oo adag khamaarayaasha layliska laakiin markii aad fahanto, waxay noqon kartaa baashaal badan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad sii odoroso waxqabadka koox gaar ah. Buugga isboortiga wuxuu dejinayaa "waxqabadka la filayo" ee koox waxaadna ku qamaami doontaa haddii kooxdu ay ka fiicnaan doonto rajada ama ay ka hoos marto natiijooyinka "rajada laga qabo". Tani ma aha oo kaliya inay udgoonayso sharadka laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho faa'iidooyin badan.
Wadarta Isku-xirka: Nooc kale oo xiiso leh oo sharad ah ayaa ah Wadar-khamaarista. Haddii ciyaarta la filayo inay noqoto mid hal dhinac ah oo aadan rabin inaad ku khamaarto macaash yar, waxaad saadaalin kartaa wadarta dhibcaha ciyaarta. Buugga isboortiga wuxuu dejinayaa xariiq dhibco guud ah shaqadaaduna waa inaad soo wacdo haddii dhibcaha ugu dambeeya ay ka hooseeyaan ama ka sarreeyaan khadka.
Khamaarista mustaqbalka: Khamaarista mustaqbalka waa wax yar oo khatar ah laakiin xiiso leh isla waqtigaas. Haddii aad u yeeraysid guuleyste xilli-ciyaareedka NBA ama tartanka NCAA, taasi waa sharad mustaqbalka ah. Waa la samayn karaa wakhti kasta oo xilli ciyaareedka ka mid ah. Faa'iidooyinka aad ku ciyaari doontid waxay kuxirantahay waqtiga aad lacagtaada gasho.
Khamaarista Dacwadaha: Sharad aan ku dhicin mid ka mid ah qaybaha kor ku xusan ayaa lagu dari doonaa. Buugga isboortiga waxaa laga yaabaa inuu saadaaliyo dhacdo dhacda inta lagu jiro ciyaarta waxaadna u baahan tahay inaad ku sharraxdo inay dhacdo iyo in kale. Xitaa waad ku sharxi kartaa haddii khalad farsamo uu dhici doono ama uusan dhici doonin.
Talooyin iyo Tabaha si aad ugu guuleysato Weyn
Sharadku waa ciyaar nasiib laakiin u socosho iyada oo aan la helin istiraatiijiyad habboon waa nacasnimo. Waxaad ubaahantahay waxkasta oo qorsheysan kahor intaadan dhigin sharadkaaga.
Falanqeeyaan safafka: Kani waa mid ka mid ah talaabooyinka aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad raacdo ka hor inta aadan wicin. Tani waxay umuuqan kartaa waxoogaa aad u muuqda laakiin inta badan khamaarayaasha bilowga ah waxay u qaataan si fudud oo waxay ku dambeeyaan luminta. Ka fiiri qoryaha waawayn oo hubi inaan midkoodna ku dhaawacmay ama dalxiis ku maqnayn.
Darbo dhibco culus: Kubbadda koleyga ee koleejka, inta badan kooxuhu waxay ku tiirsan yihiin seddex dhibcood oo dhibco ah inta ay goolal dhalinayaan. Laakiin maalin-ka-baxsan, tallaalladaasi ma noqon karaan kuwo waxtar u leh had iyo jeer. Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso haddii kooxaha sidan oo kale ay leeyihiin ikhtiyaar gurmad ah ama ay awoodaan inay wax ku dhaliyaan darbooyin kale. Qodobkani waa mid aad muhiim u ah haddii aad qorsheyneyso inaad ku sharraxdo koox kulleejo ah.
Isha ku hay jadwalka ciyaarta: Waxaad u baahan tahay inaad il gaar ah ku hayso jadwalka ciyaarta koox walba. Koox ciyaareysa ciyaaro isdaba joog ah ayaa laga filayaa inay soo bandhigaan waxqabad liita sababo la xiriira jadwal adag iyo deganaan la’aan. Sidoo kale, iska ilaali safarka joogtada ah ee koox. Koox dhawaanahan safar ku maraysay wadada ayaa laga yaabaa inay daasho inta ciyaarta socoto.
Dooro xulashooyinkaaga sharadka si xikmad leh: Inta badan bilowgu waxay kaliya u aadaan khamaarista Moneyline maadaama ay ka maqan yihiin tilmaam habboon oo ku saabsan xulashooyinka sharadka, taasoo keentay inay lumiyaan fursadihii ay ku guuleysan lahaayeen. Had iyo jeer xasuusnow inaad la baxdo shaqada guriga oo si sax ah loo qabtay si aad uga faa'iidaysato khamaarka.
Ka feejignow-buuxa sharadka qiimaha: Ugu dambeyntii laakiin uguyaraan, caarada ayaa ah in isha lagu hayo qiimaha sharadka. Sharadku maahan in markasta loo yeero kooxda guuleysata. Mararka qaar khamaarka kooxda guuldaraysata ayaa ku siin karta faa iidooyin sare. Raadi sharadkan qiimaha ah. Tani waxay noqon kartaa wax yar oo khatar ah waxaadna u baahan tahay inaad geesi noqoto si aad wicitaan sidan oo kale ah u sameyso, laakiin abaalmarinta ayaa mudan. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax madadaalo ah oo khamaarista iyada oo aan wax yar oo khatar ahi ku jirin.
Khaladaadka Rookie ee Caadiga ah: Qaar badan oo naga mid ahi ma jecla inay qalad sameeyaan khaasatan haddii ay lacagteenna innaga khasaarayso. Waxaad ubaahantahay inaad iska ilaaliso qaladaadkan rookie-ga ah si aad fursad uguhesho inaad guuleysato.
Waxaan illoobayaa raadinta jadwalka ciyaarta:
Had iyo jeer xasuusnow inaad isha ku hayso jadwalka ciyaarta kooxaha. Uma baahnid inaad ku sharraxdo rajo aad u badan oo aad ku dhammaato guuldarro sababtoo ah kooxdaadu waxay lahayd "maalin-fasax". Intaas waxaa sii dheer, ha ku khamaarin koox kaliya maxaa yeelay kooxda kale waxaa laga filayaa inay daal leeyihiin. Tixgeli dhammaan arrimaha ka hor intaadan qatar gelin lacagtaada.
Saadaalinta ku saleysan dusha sare:
Waligaa ha ku gabagabeyn adigoo si fudud u daawanaya waxyaabaha muhiimka ah ee ciyaarihii hore. Kuwani waa uun tilmaamo mana ku siinayaan aragti dhammaystiran oo ku saabsan waxa dhab ahaan ciyaarta ka dhacay. Uma baahnid inaad waqti ku lumiso adoo daawanaya waxyaabaha muhiimka ah laakiin waxaad ku dhamaanaysaa qamaarka.
Ku tiirsanaanta gebi ahaanba wararka warbaahinta:
Kanaallada isboortiga waa ilo weyn oo lagu helo aragti ku saabsan ciyaarta laakiin waligaa ha ku soo gabagabeyn guntaada iyadoo ku saleysan cilmi baaristooda. Wararka sida dhaawacyada iyo safafka ayaa laga yaabaa inay ku yimaadaan waxtar laakiin ma aaminaan waxa ay doorteen ciyaarta. Had iyo jeer samee baaritaankaaga si aad u xoojiso fursadahaaga ku guuleysiga sharadka.
Ma hubinayo safafka:
Khalad aad u badan oo khamaarayaashu sameeyaan ayaa ah inaysan hubin safafka kooxda ciyaarta. Waxaad ubaahantahay inaad iska ilaaliso qoryaha waawayn ee kooxda kasoo horjeedda oo aad raadiso wax dhaawac ah kooxda aad dooratay. Uma baahnid inaad ku sharadto koox ku tiirsan ciyaartoy aan xitaa dheelin. Had iyo jeer dhig sharadkaaga kooxda safka ugu fiican.
Ma ammaan baa in sharad internetka?
Waa su'aal aad u muhiim ah oo dadka bilowga ah badankood maskaxda ku hayaan. Jawaabtu waa haa, waa gebi ahaanba amaan iyo badbaado in sharad lagu galo khadka tooska ah. Kaliya ku dheji tilmaamaha sharadka si aad uga fogaato wixii dhib ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hesho goob lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo oo ku siin karta jawi aamin ah oo lagu khamaro.
Bogga ugu weyn » Sharadka Kubadda Koleyga